Fananana Crypto sy Cryptocurrency: Inona no tokony ho fantatsika alohan'ny hampiasana azy ireo? | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | | About us, maro
Nasongadina indray izy io na efa fahalalàn'ny besinimaro momba ny lohahevitra momba ny Cryptoassets, indrindra ilay mifandray amin'ny olan'ny Cryptocurrencies, noho ny fandefasana ny Cryptocurrency Libra ary ny azy "Calibra Wallet" avy amin'ny «Fikambanana Libra» anisan'izany ny sasany amin'ireo orinasa lehibe indrindra amin'ny teknolojia sy ny varotra elektronika manerantany, anisan'izany Facebook, araka ny noresahina tato amin'ny lahatsoratray izay antsoina hoe: Cryptocurrency Facebook miorina amin'ny blockchain Libra miaraka amin'ny kitapom-bolanao nomerika.
Ankoatr'izay, ny fiakarana vaovao amin'ny vidin'ny ny Cryptocurrency voalohany, malaza sy be mpampiasa indrindra, antsoina hoe «Bitcoin», izay ny vidiny amin'izao andro izao (Jona-2019) dia manodidina ny $ 10 (USD) no nanohana ny fipoahana vaovao momba ny Cryptoassets amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy. Inona no antony ilana hanaovana endrika fantatra, teny na hevitra mifandraika amin'izany Cryptoassets sy Cryptocurrencies hampitomboana ny fahombiazan'ny fananganana azy ireo, satria ireo miorina amin'ny fahatokisana izy ireo ary mampiasa ny mpampiasa omena azy ireo.
Amin'izao fotoana izao sy manerana an'izao tontolo izao dia misy tsara sy mahasoa Tetikasa crypto sy tetik'asa crypto mandeha izao. Ny sasany dia tetikasa vao haingana sy ho avy mpandala ny mahazatra izay mifanindran-tanana amin'ireo andrim-panjakan'ny banky amin'izao fotoana izao, ny hafa kosa tetikasa efa taloha sy vao tsy ela akory izay zava-baovao izay miara-miasa amin'ireo fikambanana lehibe sy tsy miankina na orinasa tsy miankina ary misy ny sasany ary tetikasa ho avy sy ho avy TENA mifanome tanana amin'ireo andrim-panjakana any amin'ny firenena sasany.
Noho io dia tena ilaina tokoa ny mahafantatra sy mahatakatra tsara araka izay azo atao fa izy ireo Fananana Crypto sy Cryptocurrencies ary ny terminolojia sy ny teknolojia mifandraika amin'izany ho tombotsoan'izy ireo sy ireo rehetra izay amin'ny fotoana sasany dia mety asaina, terena ary omena baiko hampiasa azy io mihitsy aza.
1 Terminology sy teknolojia mifandraika amin'izany
1.1 Digital Economy
1.2 Teknolojia ara-bola
1.3 Teknolojia momba ny kaonty voazara (DLT)
1.4 Blockchain Technology
1.5 Fitrandrahana nomerika
1.6 Toro, Cryptoassets ary crypto
1.7 Fifanakalozana Cryptocurrency
Terminology sy teknolojia mifandraika amin'izany
Sehatra varotra vaovao izy io izay mivoatra sy mivelatra tanteraka. Amin'ny ankapobeny dia manondro ny iray manontolo izy io varotra elektronika na nomerika natao tamin'ny Internet ary ireo haitao farany momba ny fifandraisana sy ny fifandraisana (TIC) hahafahana manao sy mahazo vokatra vaovao sy tsara kokoa, entana ary serivisy amin'ny tsindry vitsivitsy. Raha ny zava-misy ihany no resahin'ny Electronic Commerce, ny fizotry ny fividianana sy fivarotana vokatra amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika, toy ny fampiharana finday sy ny Internet.
Ity faritra vaovao ity dia mampiditra sy mampifandray ny haitao amin'ny sehatra samihafa (fanabeazana, asa, fialamboly, famatsiam-bola, varotra, fifandraisan-davitra) hahazoana fomba hafa mahomby, azo antoka ary manokana ho an'ny rehetra.
Amin'ny toekarena nomerika, Ny Internet dia miasa ho sehatra iraisan'ny rehetra amin'ny famoronana asa, famoronana harena, ary fizarana sy fanjifana entana sy serivisy. Izany rehetra izany mba hamaly ny filan'ny fiarahamonina ankehitriny, fiarahamonina teknolojia mifototra amin'ny fahalalana.
Teknolojia ara-bola, imbetsaka antsoina hoe «Vola ara-teknolojia» na FinTech, dia fotokevitra iray izay niavian'ny anarany fanafohezan-teny ny teny anglisy "Teknolojia ara-bola". Ary manondro manokana ireo teknolojia maoderina rehetra ampiasain'ny fikambanana (orinasa, orinasa ary indostria), miankina amin'ny fanjakana sy tsy miankina, amin'ny sehatra rehetra (asa ara-bola, varotra, teknolojia ary sosialy) hamoronana sy hanolorana vokatra, entana ary serivisy vaovao.
Ny hafa mpandala ny nentin-drazana kokoa, mazàna dia heverina ho toy ny FinTech ihany ho andiana orinasa eo amin'ny sehatry ny vola izay manome hevitra vaovao sy maodely ara-toekarena sy ara-barotra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny TIC vaovao sy maoderina. Anisan'ireo teknolojia mandrafitra an'io hevitra io ny Distribution Accounting Technology (DLT) sy ny Blockchain Technology (Blockchain) ary ny Crypto-commerce (Cryptoassets sy Cryptocurrencies).
Raha fintinina, ny teknolojia ara-bola dia manana tanjona ny hahatonga ny haitao maoderina indrindra hanolotra mpanjifa betsaka indrindra, vahaolana (entana na serivisy tsara kokoa) ara-bola sy ara-barotra amin'ny fomba mora azo, ara-toekarena, mahomby, goavana, mangarahara, azo antoka ary mahaleo tena.
Teknolojia momba ny kaonty voazara (DLT)
Distrger Ledger Technology, fantatra ihany koa amin'ny fanafohezany azy amin'ny teny anglisy DLT avy amin'ilay andian-teny hoe "Distraced Ledger Technology" Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny sehatry ny fampandrosoana tsy miankina, fa misy ny Blockchain Technology, izay mitovy amin'ny ankapobeny fa ny sehatry ny fampandrosoana ho an'ny daholobe. Ny DLT dia miresaka teknolojia amin'ny fomba feno fotsiny, izany hoe ny teknolojia mahatonga ny fifanakalozana amin'ny Internet azo atao amin'ny fomba azo antoka sy tsy misy mpanelanelana, amin'ny alàlan'ny tahiry voazara, izay miantoka ny tsy fiovan'ny fiainana sy ny fiarovana cryptographic ny angona.
Ny resaka DLT dia misy, ny hevitra momba ny tambajotra node nozaraina sy nozaraina, izay manondro ireo mpampiantrano mitahiry kopian'ny tahiry ampiasaina, mba hisorohana ny data tsy ho voafitaka, raha tsy hoe misy Fanafihana 51%, izay tsy inona fa ny fanafihana iray izay ahazoan'ny mpitsikilo fifehezana ny ankamaroan'ny teboka, miditra an-tsehatra amin'ny fanapahan-kevitry ny tambajotra, mitantana ny fanovana izay rehetra tiana atao. Ka manitsakitsaka ny fitsipiky ny fitantanana amin'ny tambajotra, izay manandrana mitazona ny demokrasia voalanjalanja eo amin'ireo mpandray anjara (node), mba tsy hisy fitaka na fanodinkodinana eo amin'izy ireo.
Ny foto-kevitry ny Blockchain dia tsy tokony hafangaro amin'ny DLT. Ny fanaovana fampitahana mba hahatakarana ireo hevitra roa dia azo lazaina fa, raha miresaka vola, DLT dia mety ho ny konsep «Currency» ary ny Blockchain dia ho tokana manokana, ohatra, ny Dollar, ny Euro, ny Ruble na ny Yuan. Tahaka ny iray amin'ireto dia iray amin'ny vola maro, ny Blockchain dia DLT. DLT no teny mahazatra, ary ny Blockchain dia teny manokana, izay manana ny lazany amin'ny fisondrotana amin'ny fananana crypto, indrindra ny crypto. Ka rehefa miresaka momba ny Blockchain dia matetika ny iray dia manondro ilay sehatra tany am-boalohany "Bitcoin", izay voalohany noforonina.
Blockchain Technology, fantatra koa amin'ny anarana hoe Blockchain, amin'ny anarany anglisy, no manonona an'io teknolojia izay misy ny filaharana andian-tsoratra izay mitahiry fampahalalana ao anaty tamba-jotra, ary izany dia tsy maintsy ary hamarinin'ny mpampiasa azy hatramin'ny famoronana ka hatramin'ny farany. Ary ny toerana misy ny sakana tsirairay dia misy tondro hash an'ireo vato teo alohany, mamorona tambajotra mifandray. Ny Blockchain dia matetika koa mifandraika amin'ny anaran'ny fikambanana tsy miankina iray izay manao block explorer izay manana anarana mitovy ihany koa.
Amin'ny Blockchain, ny hash dia tsy inona fa ny andiana tarehimarika tsy mitombina izay maneho toy ny fanehoana kely ny angona hafa amin'ny habe rehetra. Ampiasaina hisorohana ny hosoka amin'ny teknolojia voalaza io. Koa satria ny sakana tsirairay dia samy manana ny hash manokana natokana ho azy, ho fanampin'ny angon-drakitra voatahiry ao aminy sy ny hash an'ny sakana teo aloha. Ampiasaina amin'ny fomba toy izany ny Hashs, raha miova ny atin'ny sakana dia miova ny hash an'io sakana io. Ary raha ovaina ny hasy nefa tsy vokatry ny fiovan'ny atiny, dia misy fahatapahana any amin'ny sakana rehetra aorian'izany.
Sahala amin'izany Blockchain dia lasa karazana articulation an'ny teknolojia voarafitra ao anaty rafitra voaaro voajanahary, izay manome fitaovana azo antoka sy azo antoka ho an'ny mpampiasa, ny mombamomba azy, ny angon-drakitra ary ny fifanakalozana, tsy mila mpanelanelana amin'ny alàlan'ny Internet. Fomba iray manome antoka fa ny zavatra rehetra natao dia mitombina, voamarina ary tsy azo ovaina, izany hoe manana toetra tsy miovaova.
Matetika ny Digital Mining dia manondro ny fihetsika (fomba na fihetsika) hamahana ny sakana iray, manamarina ny fifanakalozana rehetra ao aminy hahazoana valiny valiny. Raha lazaina amin'ny teny hafa, io dia ny dingan'ny mpampiantrano (node) mamaha ny asan'ny cryptographic ao anatin'ny Blockchain, izay mazàna mamorona marika, fananana crypto na cryptocurrency ho vokatra farany. Izany dingana rehetra izany dia mazàna mandeha amin'ny hafainganam-pandeha napetraky ny algorithma tsara sy ny fepetra arahana teknika efa voafaritra mialoha.
Ao anatin'io fihetsika voalaza io, ny teboka iray dia manamarina ny fifampiraharahana mety, avy eo fonosina ao anaty sakana miaraka amin'ny hash mifanaraka aminy, avy eo safidio ny hash an'ny sakana teo aloha ary ampio amin'ny iray ankehitriny. Avy eo tantano ny algorithm marimaritra iraisana an'ny Blockchain teratany hahazoana antoka fa misy teboka iray nanao ny ezaka ilaina hamita ny sakana voatondro sy hahazo ny valiny mifanaraka amin'izany.
Ao amin'ny Digital Mining, Ny «Algorithmons de consensus» dia tsy inona fa ny fehezan-dalàna hamaritana hoe iza amin'ireo kopian'ny Blockchain no marina ary iza no tsy marina. Ireo fitsipika ireo dia azo faritana amin'ny fomba tsotra fotsiny hoe: "Ny rojo lava indrindra izay ho raisina ho marina indrindra dia ny an'ny Blockchain misy be indrindra" ary ny "The chain of blocks with the most support will be consider as valid." Betsaka ireo «Algorithma marimaritra iraisana» amin'izao fotoana izao handrefesana ny fanohanana ny tambajotra, fa anisan'ireo malaza indrindra ny: Porofon'ny asa / POW ary porofon'ny tsatòka / POS.
Ankoatry ny «Algorithmons de consensus», ilay «malazaEncryption na Algorithme Encryption »izay fiasa izay manova ny hafatra ho lasa andian-tantara tsy azo vakiana. Ao anatin'ny Blockchain ireo dia ampiasaina hanamarinana ny fifanakalozana. Ny sasany amin'izy ireo dia: CryptoNote, CryptoNight, Equihash, Scrypt, SHA ary X11.
Toro, Cryptoassets ary crypto
Ao anatin'ny Blockchain, Ny mari-pamantarana matetika dia faritana ho toy ny marika cryptographic izay maneho ny sandan'ny sandam-bola azo alaina ao mba hampiasaina taty aoriana hahazoana entana sy serivisy. Anisan'ireo zavatra marobe, ny Token dia azo ampiasaina hanomezana zony, handoavana ny asa vita na hovonoina, handefasana angona, na ho fanentanana na vavahady ho an'ny fanatsarana ny serivisy sy ny asa ilaina.
Mandritra a Cryptoactive dia mazàna faritana ho marika manokana izay avoaka sy amidy ao anatin'ny sehatra blockchain. Matetika koa izy io dia manondro ny tsirairay amin'ireo mari-pamantarana isan-karazany (cryptocurrency, fifanarahana hendry, rafitra fitantanana, ankoatry ny hafa) ary endrika entana sy serivisy hafa izay mampiasa cryptography hiasa.
Ary farany, ny Cryptocurrency dia iray amin'ireo karazana Crypto Asset, izay mivadika ho sokajy antsoina hoe Digital Asset. Raha toa ny Digital Asset dia raisina ho toy ny zavatra misy amin'ny endrika binary ary tonga miaraka amin'ny zony hampiasana azy tsirairay avy, izay tsy fananana azy intsony dia tsy azo raisina ho fananana nomerika. Ny Digital Asset dia mety ho antontan-taratasy nomerika na rakitra multimedia (lahatsoratra, feo, horonan-tsary, sary) mivezivezy na tehirizina amin'ny fitaovana nomerika.
Fanakalozam-bola (Exchange) an'ny Cryptocurrencies dia manondro ireo tranokala izay anaovana hetsika fividianana sy fivarotana cryptocurrency. Ireo dia mazàna koa mamela ny fiasana amina karazana fananana hafa toy ny fizarana na fiarovana ara-bola eken'ny mpikambana ao amin'ny fiarahamonina mandrafitra azy.
Ny tanjona kendrena a Fifanakalozana nentim-paharazana na fitsinjaram-pahefana (DEX), dia ny mamela ny mpampiasa (mpivarotra) Afaka mandray anjara amin'ny tsena crypto tantanana izy ireo mba hahazoana tombony arakaraka ny fiovaovan'ny vidiny (sanda maimaimpoana) izay mitranga ao.
Ho fanampin'izay, mazàna ny ankamaroany sehatra voafehy tsara, izay mifanaraka amin'ny fenitry ny KYC (Fantaro ny mpanjifanao) y AML (Anti-famotsiam-bola). Ary matetika izy ireo vola ho an'ny serivisin'izy ireo ary hametraka azo antoka fetra renivohitra handray anjara amin'ny sehatra misy azy.
Ary farany, ny Fifanakalozam-bola voafidy (DEX) Tsy toy ny Fifanakalozana nentim-paharazanaMiasa amin'ny fomba mitovy amin'izany izy ireo, na izany aza, ny voalohany dia afaka miasa amin'ny fomba itsinjaram-pahefana. izany hoe ao amin'izy ireo tsy misy mpanelanelana ary mizaka tena ny sehatra noho ny fandaharany. Noho io antony io dia matetika no miteny izy ireo avo lenta ny tsiambaratelo ary tsy fantatra anarana aza.
Betsaka ny zavatra tokony hianarana, indrindra amin'ny antsipiriany sy ny halaliny bebe kokoa momba ny Crypto Assets sy Cryptocurrencies, Financial Technologies ary Blockchain. Fa raha ny tena izy, ny zavatra aseho eto dia manerantany ireo teboka tena ilaina indrindra tokony hanombohan'ny mpikaroka vaovao na olon-tsy fantatra hizaha sy hanomana ny fanovana izay holazain'ity endrika elektronika na nomerika vaovao ity, izay manambana tsikelikely ny fahaverezan'ny vola. vola sy fidusiary, avy amin'ny firenena rehetra, ary manomboka mifaninana amin'ny vola entam-barotra aza, toy ny Volamena, Volafotsy, Varahina, ankoatry ny hafa; ary soloina ny vola virtoaly misy tranonkala sasany.
Raha irinao, vakio ireo lahatsoratra hafa mifandraika amin'ilay lohahevitra ao amin'ny bilaoginay, dia amporisihinay ireto lahatsoratra manaraka ireto: «Crypto-anarchism: Rindrambaiko maimaim-poana sy ny vola ara-teknolojia, ny ho avy?"Ary"Amerika Latina sy Espana: Tetikasa Blockchain miaraka amin'ny Cryptocurrencies".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fananana Crypto sy Cryptocurrency: Inona no tokony ho fantatsika alohan'ny hampiasana azy ireo?
Luis Jose Larez dia hoy izy:
Toa nahaliana ahy tokoa ity lahatsoratra ity, satria amin'ny fiteny mazava sy mora takarina, na dia ho antsika tsy manam-pahalalana ara-teknika momba ny fananana crypto sy cryptocurrency aza, dia heveriko fa tena ilaina tokoa ny manohy ny fikarohana an'io fahalalana io, hatramin'ny fanekena amin'ireo vola virtoaly ireo dia tsy maintsy amin'ny fitomboany ankehitriny, ny fomba azo antoka indrindra hanaovana fifanakalozana ara-toekarena sy ara-bola ato ho ato.
Valiny tamin'i Luis josé Larez
Miarahaba, Luis! Misaotra betsaka noho ny hevitra tsara nataonao. Faly izahay fa tena mahasoa ny karazana mpihaino rehetra ilay lahatsoratra, indrindra ireo izay manomboka mianatra momba an'ity tontolo ity.
Otto Gutman dia hoy izy:
mahaliana ny marina
Valiny tamin'i Otto Gutman
Miarahaba anao, Hernán. Misaotra betsaka anao tamin'ny hevitrao, antenaiko fa nanampy betsaka anao ny famakiana mba hanombohanao amin'ny tongotra ankavanana amin'ny fahalalana an'io faritra manan-danja amin'ny fahalalana ankehitriny io.
Mivoaka ny divay 4.11 ...
Libhandy tranomboky iray hamoronana kinova finday an'ny fampiharana GTK sy Gnome